14 / 03 / 2019 30 / 03 / 2019 ရော့ Paton 1296 Views စာ0မှတ်ချက် 75230 Porg, 75956 Quidditch ပွဲစဉ်, Brexit, Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း, ဘယ္လို, Lego, Lego မဂ္ဂဇင်း, Lego Overwatch, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ
Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်းနံပါတ် ၃ ကို ယနေ့မှစ၍ ယူကေရှိစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အလျင်အမြန်၊ ဒါကအလွန်ရှည်လျားသောစင်ပေါ်မှာမဟုတ်ပါ…
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ကျနော်တို့၏ဆိုက်ရောက်ကြေညာခဲ့သည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ယူကေနှင့်အမေရိကန်စတိုးဆိုင်များသို့artပြ3.နာ ၃ နှင့်အတူလေ့လာခြင်းယနေ့ခေတ်တွင် UK သည်ဖောက်သည်များသည် WHSmith စတိုးဆိုင်များသို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ A5 အရွယ်ရှိစာမျက်နှာ ၈၀ ပါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု၏တကယ့်ဘဝမိတ္တူကိုရှာတွေ့နိုင်သောပထမဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။ Lego.
သင်သည်သင်၏အနီးဆုံး WHSmith စတော့ရှယ်ယာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ဒီမှာ။ Barnes & Noble မှထုတ်ဝေထားသောနံပါတ် (၃) မိတ္တူကိုအမေရိကန်ဖောက်သည်များသည်Aprilပြီ ၁၈ ရက်အထိစောင့်ရမည်။ မဂ္ဂဇင်းသိုလှောင်ထားသော Barnes & Noble စတိုးဆိုင်များစာရင်းသည်မကြာမီတွင်လိုက်နာလိမ့်မည်။
၏ပြ3နာ XNUMX Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသည် Lego Overwatchရှေ့မျက်နှာဖုံးကိုအလှဆင်ထားသော D.Va ။ အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့နှစ်ခုမှပြောဆိုပါ Lego အုပ်စု၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Blizzard နှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းတီထွင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဤထူးခြားသောအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန် Lego အစုံ။
ဤပြissueနာသည်ဗြိတိသျှကျေးလက်ဒေသတစ်လျှောက်ရှာဖွေရေးအတွက်လည်းပါဝင်သည် PORGSp ကိုယူပြီးပန်ကာတည်ဆောက်သူနှစ် ဦး နှင့်စကားပြောရန်art ထဲမှာ AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်စာနယ်ဇင်းသမား Jme Wheeler သည်သူနှင့် ပတ်သတ်၍ အလွန်ကောင်းသောအလုပ်သစ်ကိုပြသခဲ့သည်art ကျော် ဘီလ်ဒန်.
ဂျာနယ်လစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Christian Faber သည်သူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သောသူ၏အချိန်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားသည် Lego ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ ပင်လယ်ဓားပြများ ကော်ပီဘယ်လောက်များများအတိအကျကြည့်ဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုရှိတယ် 75956 Quidditch ပွဲစဉ် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အနိမ့်ဆုံး Quidditch အသံအနိမ့်အမြင့်အတွက်လိုအပ်သည် Brexit - သဘောတူညီချက်မ ၏ဗြိတိန်ပရိသတ်တွေအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါ Lego.
ငါတို့ရဲ့ကိစ္စသေးသေးလေးလည်းရှိတယ် ဘယ္လို နှင့်အတူထုပ်ပိုးသောဤပြissueနာအတွက်ပွဲ ဦး ထွက်အပိုင်း Lego အကြံဥာဏ်များ, လှည့်ကွက်များနှင့်နည်းစနစ်များ။ ဤမဂ္ဂဇင်းသည်စာဖတ်သူများအားလိုအပ်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုပေးရန်ရည်ရွယ်သည် မင်းရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ပါ Legoနှင့် st မှပိုကောင်းဘယ်နေရာမှာရှိပါတယ်art ငါတို့ထက် ဘယ္လို အပိုင်း။
ယူကေရှိသင်တို့ထဲမှသူများကို (မကြာမီယူအက်စ်မှသင်တို့ထဲမှများ) ကိုမိတ္တူကူးရန်သင့်အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်သို့သွားရန်ပြောခွင့်ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေသည် Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း ယနေ့။
ပြIssueနာ ၄ မှစ။ Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း လစဉ်သိုလှောင်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့် Issue3ဗြိတိန်ရှိစတိုးဆိုင်များတွင်သာဖြစ်ပါတယ် သုံးပတ်ကြာသည်။ လက်လွတ်မသွားပါနှင့်ကျေးဇူးပြုပြီးမိတ္တူတစ်စောင်ကောက်ယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ပါ။
Brick Fanatics မဂ္ဂဇင်း မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည် brickfanatics.com/magazineစတိုးဆိုင်များတွင်မထွက်ခွာမီအခမဲ့စာပို့ခ၊ အခမဲ့ပြissuesနာများနှင့်ပြdeliveryနာတစ်ခုချင်းစီကိုဖြန့်ဝေပေးသော ၁၂- မျိုးဆက်နှင့် ၂၄- မျိုးထုတ်ပေးသည့်သဘောတူညီမှုများကဲ့သို့ပင်။
← နယူး Avengers: Endgame နောက်တွဲယာဉ်မှာ Captain ပါ ၀ င်သည် Marvel
Lego Star Wars ချီကာဂိုပွဲသို့ချီကာဂိုသို့လာသည့်ကာတွန်း panel →